"ကာလရှည်ကြာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်က မြန်မာပြည်ရဲ့အဓိကအဖြစ်အပျက်များ" - Yangon Nation News
■ Jan4, 1948
ထိုစဉ်က Burmaဟုသိခဲ့ကြသောတိုင်းပြည်သည် ဗြိတိသျှကိုလိုနီ အုပ်ချပ်မှု အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။
စစ်ခေါင်းဆောင်နေဝင်းသည် မြန်မာပြည်ကိုစစ်အာဏာသိမ်း၍ စစ်အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်ဂိုဏ်းသားများဖြင့် မြန်မာပြည်ကို နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်းတဦး၏ သမီးဖြစ်သူ​​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒီမိုကရေစီလိုလားတောင်းဆိုသူများက စစ်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများတပြည်လုံးမှာမီးတောင်တခုလိုပေါက်ကွဲတောက်လောင်နေစဥ်မှာမိခင်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ြသဂုတ်လဆန္ဒပြပွဲများတွင် စီတန်းလှည့်လည်သူများကိုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ရာ၊ရာပေါင်းများစွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
■ 1989 July
ရာဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွါးလာခဲ့ပြီးနောက် ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်
■ 1990 May 27
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တည်ထောင်ခဲ့သောအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ရွေးကောက်ပွဲများ၌ တောင်ပြို ကမ်းပြို အနိုင်ရရှိခဲ့သော်လဲ စစ်အုပ်စုက အာဏာလွှဲ ပြောင်းပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
■ October 1991
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့သောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆု ချီ းမြှင့်
■ November 7,2010
စစ်အုပ်စုကိုလိုလားထောက်ခံသောပါတီသည် အနှစ်၂၀အကြာမှာပဌမဆုံး ပြန်လည်ကျင်းပပေးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများတွင် သူ့ကိုမျက်နှာသာပေးအကြံအဖန်လုပ်ခဲ့ပြီးတရားမျှတမှုမရှိဟု မဲပေးမှုကို ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ခံရသည့် ရွေးကောက်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
■ November 13, 2010
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအကြာ ကာလရှည်ကြာစွာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရရာကနေ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိ၍ လွှတ်တော်ထဲတွင် နေရာရလာခဲ့သည်။အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောရုံးကိုပဌမအကြိမ်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
■ November 8, 2015
NLDပါတီသည် 1990ခုနှစ်ကတည်းက ပဌမအကြိမ်အဖြစ် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ကျင်းပခဲ့သော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိမ်းကျုံး အနိုင်ရခဲ့သည်။
စစ်အုပ်စုသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတမဖြစ်အောင်လဲပဲ တားဆီးထားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအေါက်တွင် အာဏာကိုဆက်လက်စွဲကိုင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။သို့သော်သူမအတွက်ဖန်တီးသော နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ရာထူးဖြင့်တိုင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။
■ August 25 , 2017
ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းတွင် စစ်တပ်ရှေ့တန်းစခန်းများကို သောင်းကျန်းသူများက တိုက်ခိုက်၍ ဒါဇင်များစွာကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။စစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာမူဆလင်လူထုကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချေမှုန်းသုတ်သင်ခြင်း ဖြင့်ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။မူဆလင်ထောင်ပေါင်းရာချီသောအရေအတွက်(သိန်းနဲ့ချီသော)ရိုဟင်ဂျာများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲသို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဿီဟိဂ် (TheHague) နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွင်စစ်အုပ်စုဘက်မှနေ၍ ခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။စစ်အုပ်စုက လူသားမျိုးနွယ်တုံးအောင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုငြင်းဆန်ပြောဆိုပေးခဲ့သည်။
■ November 8 , 2020
မြန်မာပြည်တွင်ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပသည်။NLDပါတီသည် လွတ်လပ်ပွင်းစွာပါလီမန်လွှတ်တော်တွင် မဲအရေအတွက်အများစုဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
■ Jan 29 , 2021
ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲမသမာမှုရှိသည်ဟု အထောက် အထားမခိုင်လုံပဲစွတ်စွဲပြောဆိုနေမှုများကို ငြင်းပယ်လိုက်သည်။စွတ်စွဲပြောဆိုနေမှုများအတွက်ခိုင်လုံသောအ ထောက်အထားများလုံးဝရှာမတွေ့ခဲ့ပေ။
■ Februrary 1 , 2021
မြန်မာစစ်တပ်က တနှစ်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ၍ တိုင်းပြည်ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပါသည်။အစိုးရက သူရဲ့မမှန်ကန်သောစွတ်စွဲပြောဆိုတောင်းဆိုချက်များကိုဆောင်ရွက်ပေးရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု အကိုးအကားပြပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါတီက သူမသည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့်အထိန်းသိမ်းခံဘဝသို့ပြန်လည်ကျရောက်သွားခဲ့ရသည် ဟုပြောဆိုသည်။
*A decade after junta’s end, Myanmar military back in control.
*Why did the Myanmar military stageacoup in Myanmar?
*Bangladesh sends more Rohingyas to island despite concerns.
(Ref:Key events in Myanmar,long under
military rule. By Associate Press.)